Xildhibaan Odawaa oo ammaan ku dhoobay caawin uu Gobolka Banaadir u sameeyey caruur darbi-jiif ah – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa, oo ka tirsan Golaha Shacabka, ayaa ku tilmaamay shaqo ammaan iyo bogaadin mudan daryeel caafimaad oo uu maanta Gobolka Banaadir u sameeyey caruurta darbi-jiifka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Xildhibaanku waxa uu sheegay in ay shaqdaas uu qabtay Gobolka Banaadir aad u wanaagsan tahay, in lagu ammaanana ay mudan tahay.
“Shaqo ammaan iyo bogaadin mudan” ayuu ku yiri boggiisa Feysbuugga, isaga oo halkaas kula wadaagaya sheekada caruur uu Maamulka Gobolka Banaadir u sameeyey maanta daryeel caafimaad. Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Banaadir ayaa caruurtaas, oo ku nool degmooyinka Xamar-Weyne iyo Xamar-Jajab, waxay u sameysay baaritaan iyo daweyn bilaash ah.
Ilmey yar oo darbi-jiif ah oo uu Xubin ka tirsan Waaxda Caafimaadka Gobolka Banaadir ka dhayayo nabar uga yaala anqawga
Xildhibaan Odawaa ayaa arrintaas si gaar ah ugu bogaadiyey Agaasimaha Waaxdaas Caafimaadka ee Gobolka Banaadir, Maxamed Caddow, oo uu isaga iyo Gobolka Banaadir-ba uga mahadnaqay shaqadaas. Maxamed Caddow waxa uu balan-qaaday in ilmaha darbi-jiifka ah ee aan cidna ku tiirsaneyn ay u joogteyn doonaan caawinta ay maanta u bilaabeen.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa ayaa ka mid ah Mudanayaasha inta badan dhaliila Xukumadda Soomaaliya iyo siyaasadda Madaxweyne Farmaajo, kuna eedeeyey dhawaan in Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ay ka xayirtay Galmudug deeqo iyo mashaariic ay, sida uu sheegay, dhibaato nololeed u wajahayaan dadka Galmudug iyo Maamulkooda.
Ilmey yar oo darbi-jiif ah oo uu Xubin ka tirsan Waaxda Caafimaadka Gobolka Banaadir ka dhayayo nabarro uga yaala madaxa
Xildhibaanno sheegay inuu dhamaaday Khilaafkii Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Hirshabeelle